I-CAD / GIS phakathi kwezinto eziphambili kwi-Software Software-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Isiseko seSofthiwe yeFree (FSF) yenziwe kwi-1985 ngenjongo yokukhuthaza ukusetyenziswa, ukuphuhliswa nokukhuselwa kwesofthiwe phantsi kweelayisenisi ezingekho mthethweni zesikimu soshishino. Nge-Gigabriones Ndafunda ukuba i-FSF yamemezele iiprojekthi eziphambili ezilishumi elinanye, kubandakanywa ezimbini kwiindaba ze-geospatial:
Ukutshintshwa kweGoogle Earth
Kukho iinzame eziliqela zebhaluni ezithengileyo kwifom yesakhiwo, ezifana Titan eLeica, I-ArcGIS Explorer ESRI, Ehlabathini elungileyo kwiMicrosoft, Umoya Womoya kwiNASA kunye GeoShow.
Kodwa ke, iGoogle Earth iyona ethandwa kakhulu, ngenxa yokusetyenziswa kwezibonelelo ezincinci xa kuthelekiswa nabanye kwaye kuba yiGoogle ojongene nokwenza umsindo. Olu sasazo lwandise inani leenkcukacha eziqulethwe kwaye ngoko ke abantu bayayithanda; ngoko iFSF ifuna ukutshintshwa kwayo phantsi kokusetyenziswa kwamahhala.
Kuqondwa ukuba awukwazi ukufikelela kwiData ye-Google kodwa ukuba ufunde iifayile ze-kml, ufinyelele eminye imithombo yolwazi phantsi kwemiqathango ye-OGC kuquka nesiseko Vula i-Street Street (OSM) kwaye kwakhona kuya kumgca wokubambisana Marble.
Ukutshintshwa kweelayibrari ze-OpenDWG
Kule nto, sijonge iphrojekthi ejoliswe ekuxhaseni ukusetyenziswa, ukusasazwa kunye nokumgangatho phantsi kwelayisenisi yamahhala kwiifom ze-CAD. Akuyi kuba kubi xa sikhumbula ukuba Vula iNdibaniso yoBumbe ngaphandle kwamanyathelo afana nawo IntelliCAD ukuba zibangelwa yi le mbono, incinane likwazile ukwenza emva konyaka dwg 2000 nendlela crazy ukutshintsha i parameters yi AutoDesk kunye Bentley V7 elithe wakwazi sidlule nokuba khona iinkcukacha iV8 ekhoyo.
Ngenxa yoko, ezininzi iinkqubo ziyaqhubeka zivula kuphela ezo zifomathi ezindala kunye nesizathu sokuthi akukho ncediso ehambelanisiweyo nangona i-Bentley ne-AutoDesk ba cwangcise kunyaka ozayo.
Ezinye iiprojekthi eziwela phantsi kweyona nto ephambili kwi-SFS zi:
Gnash, umdlali weefayili zefayili
Coreboot, isisombululo se-BIOS yamahhala
Isofthiwe yokutshintsha i-Skype
Isofthiwe ekhululekile yokuhlela ividiyo
GNU Octave, ukutshintshwa kweMatrab
Umnatha womnatha wenethiwekhi
Post edlulileyo«Edlulileyo Incwadi Yonyaka YesiTatatisti yaseLatin America
Post Next Ukuthelekiswa kokuthengwa kwezixhobo zezobugcisaOkulandelayo "